Ciidamo ajaanib ah oo lagu soo daad-gureynayo Soomaaliya | KEYDMEDIA ONLINE
Ciidamo ajaanib ah oo lagu soo daad-gureynayo Soomaaliya
Ciidamada Uganda ayaa loo tix-galiyaa in ay yihiin ciidanka ugu dhaqdhaqaaqa fiican AMISOM, waxayna gacanta ku hayaan aagga ugu weyn Soomaaliya, oo ay ka howlgalaan ciidamada nabad-ilaalinta.
KAMPALA, Uganda - Ugu yaraan 1,846 Askari oo ka tirsan Ciiddanka Difaaca Dadka Uganda (UPDF) ayaa lagu wadaa in la geeno Soomaaaliya, inta u dhaxeysa Sebtember 2 iyo Oktoobar 16, 2021, si loo xoojiyo Hawlgalka Midowga Afrika (AMISOM).
Taliyaha Ciidanka Dhulka (CLF), Lt Gen Muhoozi Kainerugaba, oo arbacadii ku dhawaad 2000, oo askari kula hadlayay Xarunta Tababarka Taageerada Nabadda ee Singo (PSO-TC) ee Degmada Nakaseke oo ka tirsan Kooxda Battle 33, ayaa sheegay in daad-gureynta ciidamada la billaabayo horraanta bisha soo socota.
“Sababta aan ula dagaallano Alshabaab waa ka shaqeyta nabadda; uma joogno helidda dahab, dheeman, ama lacag. Dadka qaar baa laga yaabaa inay sidaas u fikiraan laakiin ujeeddadeennu, waa inaan ka caawino walaalaheenna sidii ay nabad u heli lahaayeen maxaa yeelay ma doonayno inaan aragno iyagoo rafaadsan,”ayuu yiri Lt Gen Kainerugaba.
Kainerugaba oo sidoo kale ah La-taliyaha Sare ee Madaxweynaha ee Hawlgallada Gaarka ah, ayaa ku boorriyay askarta inay si hufan u adeegaan, oo ay raacaan waddadii ciidankii ugu horeeray, ee la geeyay Soomaaliya.
Uganda ayaa ahayd dalkii ugu horreeyay ee ciidammo u soo dira Soomaaliya sannadkii 2007-dii.
Mandate-ka Hawlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa ku eg bisha December 2021, hayeeshee, wadahadallo dhacay billowgii todobaadkaan, Midowga Afrika iyo dowladda Soomaaliya ayaa, ka wada hadlay, sii joogitaanka ciidamada ka socda Africa.
Ku dhawaad 20 kun oo askari, ayaa waddamada Afirica ka jooga Soomaaliya, malaayiin doolar ayuuna adduunku ku bixiyaa, hayeeshee, ma jirto tallaabo amni oo ay hore u qaadeen ku dhawaad 10-kii sano ee la soo dhaafay.
Dowladdii Farmaajo, ayaa ku fashilantay, howlihii amniga ee la qorsheeyay in la hirgaliyo afartii sano ee la soo dhaafay, taas ayaana u gogol-xaareysa in AMISOM, ay muddo sii joogto Soomaaliya.